Qaxooti Soomali ay ku jiraan oo ku Hor banaabaxay Xarunta Dowladda Holland ee Heeg.+Sawirro – Radio Muqdisho
Qaxootiga ku nool wadanka Hollan ee Banaaka La soo dhigay oo ay ku jiraan Soomaali ayaa waxaa ay bananbax cabasho ah ka sameeyeen Magaalada Denmaag ee Wadanka Holland oo Xarun u ah Dowladda iyo Boqortooyada iyagoona ka cabanayey in ay dhibaato ku heysato gu daha Wadanka.
Dadkaan oo ay ku jiraan Soomaali ayaa waxaa ay saxaafada u sheegeen in wayadan ay soo cusboonaatay in Dadka la celiyo iyadoo ilaa sadax qof soo Soomaali ah si qasab ah loogu celiyey Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Wadanka Soomaaliya, taasi oo welwel ku abuurtay Qaxootiga banaan yaalka ah ee ku sugan Holland.
Dowladda Holland ayaa waxaa ay horey u sheegtay in Qofkii kiiskiisa dacwaded uu xirmo oo la diido in uusan wadanka Xaq ku lahen lana celin karo waqti kaste iyadoo dadbadan oo qaxooti ay ku rafadsan yihiin Gudaha wadanka ku waasi oo aan heysan wax xaquuq ah iyagoo ku nool meel aan nolosha qofkaBini aadam ka ahi ku habooneyn.
Qoxootigan ,ayaa waxaa ay sheegen in qarbadan oo saaxibadooda ah ay ku jiraan xabsi ku waasi oo sugaayo in la celiyo iyadoona dowladda Soomaaliya ay horey u shegtay qofka si qasab ah aan lagu celin doonin ,ilaa qofka isaga uu dalbado lakiin muddoyinkii dambe ay socotay in si qasab ah loo celinaayo Qaxootiga Soomaalida .
Qaxotiga Soomaalida ee ka midka ahaa dadka banaabaxaayey, ayaa waxaa ay ka codsadeen Ururada Bulsahada ee Wadanka Holland ,Safaarada Soomaalida ee Biljimka iyo Dowladda Soomaaliyeed in ay wax ka qabtaan Arimaha hada soo cusboonaaday ee ku aadan in si qasab ah dadka Soomaalida loogu celinaayo wadankooda.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo shacabka soomaliyeed oo dhaweeyey Magacaabista Raisul wasaaraha Cusub